०७७ वैशाख २४ गते बुधबार ई. स. २०२० मे ०६ तारिख, हेर्नुहोस तपाईंको राशिफल – Everest Pati
०७७ वैशाख २४ गते बुधबार ई. स. २०२० मे ०६ तारिख, हेर्नुहोस तपाईंको राशिफल
वि.सं.२०७७ वैशाख २४, ई.सं.२०२० मे -६ ,शक संवत्-१९४२,नेपाल संवत्-११४० बछलाथ्व,प्रमादी संवत्सर,उत्तरायण,ऋतु-वसन्त,वैशाख शुक्लपक्ष तिथि -चतुर्दशी , १९:२१ बजे उप्रान्त पूर्णिमा,नक्षत्र-चित्रा , १३:२३ बजे उप्रान्त स्वाती,योग-सिद्धि , २०:४६ बजे उप्रान्त व्यतीपात,करण-गर ०८:३३ बजेदेखि वणिज , १९:२१ बजे उप्रान्त कौलव,चन्द्रराशि-तुला,आनन्दादि योग-काल सूर्योदय-५:२३ ,सूर्यास्त-१८:४०,दिनमान-३३ घडी १३ पला,व्रत/पर्व -नृसिंह जयन्ती, स्याङ्जा, लसर्घास्थित आलम देवी पूजा, किरात समाज सुधार दिवस।
समयमा कामहरु नसकिने हुँनाले अन्य क्षेत्रमा लगानि गर्ने बाताबरण गुम्न सक्छ । व्यापार व्यावसायमा मन्दि आउने तथा घाटा लाग्नेछ । पढाई लेखाईमा अलि बढि समय खर्चिय नतिजा आफैतिर ल्याउँन सकिनेछ । प्रणय सम्बन्धमा चिसोपनको आभाष हुनेछ भने जीवन साथिको असहयोगले महत्वपुर्ण अवसरहरु जुर्न सक्छ । वाहिरी वातावरण तथा सरसफाईमा ध्यान दिनुहोला ।
अध्ययन तथा अध्यापनमा तपाई आफ्नै कारणले पछि पर्नुहुनेछ । खानपान तथा बाहिरि बाताबरणको ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या बढ्न सक्छ । माया प्रेममा सामान्य खटपट हुनेछ भने दाम्पत्य जीवनको गाठो फुस्कन सक्छ । अदालत सँग सम्बन्धित काम गर्दा ध्यान दिनुहोला निर्णयहरु तपाईको पक्षमा नआउँन सक्छ । पुराना रोग बल्झने सम्भावना रहेकोछ ।
पढाई लेखाईमा अरुदिन भन्दा राम्रो प्रगति भएर जानेछ भने प्रतिश्पर्धामा तपाईनै अग्र पंक्तिमा आउनु हुनेछ । आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउँन सकिनेछ भने तपाईको कार्य शैलिको सबैले समर्थन गर्नेछन् । प्रेम प्रशङगका कोपिलाहरु फक्रियर जानेछन् । तरपनि वाहिरी वातावरण तथा सरसफाईमा ध्यान दिनुहोला ।
खर्च बढ्ने तथा उपलब्धि हात नलाग्न सक्छ ध्यान दिनुहोला । पढाई लेखाईमा मन नजाद अरु भन्दा पछि परिनेछ । आमा तथा आफन्तबाट टाडिएरु लामो यात्रा गर्नुपर्दा मन खिन्न हुनेछ । प्रेममा रमाउने चाहनेहरुका लागि समय उत्तम नहुन सक्छ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसायबाट भने आम्दानि गर्न सकिनेछ ।
निर्णयहरु आजको दिन धाति राख्नु होला किनकी व्यापार व्यावसायमा घाटा लाग्ने योग रहेको । साना तिना कामका अल्झनु पर्दा अध्ययन तथा अध्यापनमा समय दिन सकिने छैन । स्वास्थ्य सम्बन्धि सामान्य समस्या देखा पर्नेछ । यात्रा गर्दा ध्यान दिनुहोला तपाईको यात्रा कष्टपुर्ण हुन सक्छ।
समाजमा राम्रा काम गर्न सकिने हुनाले उचाई बढ्नेछ । औषधीजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्वन्धीत सामानको खरिद बिक्रीमा वृद्धि हुनेछ भने अन्य सामानको व्यापारमा मन्दि आउँने तथा घाटा लाग्नेछ । कुटुम्ब तथा आफन्तबाट धन तथा सम्पति लाभ हुने ग्रहयोग रहेकोछ । मेलमिलाप तथा भाईचाराको सम्बन्ध स्थापनमा तपाईको भुमिका महत्वपुर्ण हुनेछ ।
काम गर्ने सवालमा सहकर्मिहरुबाट नै असहयोग हुँने हुँदा काम बिग्रने तथा मान सम्मानमा दाग दाग्न सक्छ ध्यान दिनुहोला । घर परिवार भित्रकै मानिसहरुले तपाईको नराम्रो कुराहरुको प्रचारबाजी गर्दै हिड्नेछन् । अध्ययन अध्यापनमा प्रशस्त समय खर्चिय नतिजा आफैतर ल्याउँन सकिनेछ । व्यापार व्यावसायमा लगानि गरि नाँफा कमाउँन केहि समय पर्खनु पर्नेछ भने गरिरहेको कामलाई निरन्तरता दिन सकिनेछ ।
निको भएर घर फर्किएका तीन जनामा पुनः कोरोना पोजेटिभ !
कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण दुबईमा एक नेपालीको मृत्यु